Asụ nke dị ka onye na-eme ihe nkiri Lance Bass na Mpaghara Greater Mekong
Home » Na-agbasa News Travel » Asụ nke dị ka onye na-eme ihe nkiri Lance Bass na Mpaghara Greater Mekong
A ụsụ nke dị ka onye ọbụ abụ / onye na-eme ihe nkiri Lance Bass, gibbon aha ya bụ Luke Skywalker, na toad nke yiri ka ọ sitere na Lord of the Rings “Middle Earth,” so na ụdị ọhụrụ 157 achọpụtara na Mpaghara Ukwu Mekong n'afọ gara aga, dika akuko ohuru sitere na World Wildlife Fund.
N'ime ụmụ anụmanụ ọhụrụ ahụ achọpụtara, Skywalker Hoolock Gibbon bụ nke mbụ ahụrụ n'etiti 2017 wee kpọọ aha "Star Wars" maka ihe nkiri Mark Hamill. Ka ọ dị ugbua, ọ bụ mkpụrụ osisi 25 kacha dị egwu n'ụwa ma chere ihu "nnukwu ihe egwu dị nso na nlanarị ya dị ka (ọtụtụ) ụdị obere nnụnụ ndị ọzọ dị na ndịda China na Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia n'ihi enweghị ebe obibi na ịchụ nta." ndị otu chọtara ya.
Anụ anumanu atọ, azụ iri abụọ na atọ, amphibian 23, anụ ọhịa 14 na ahịhịa 26 dị na Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand na Vietnam, n'ụfọdụ ala ebe a na-enweghị ike ịbanye, dịka ugwu ugwu na oke ọhịa, yana dịpụrụ adịpụ osimiri na ahịhịa.
Agbanyeghị, ndị ọkachamara dọrọ aka na ntị na ọtụtụ ụdị anụmanụ ndị ọzọ achọpụtabeghị ga-efu n'ihi oke ohia, mgbanwe ihu igwe, ịchụ nta na ịzụ ahịa anụ ọhịa na-akwadoghị.
Stuart Chapman, onye isi WWF nke Asia-Pacific Regional for Conservation Impact, kwuru na nkwupụta, "E nwere ọtụtụ ụdị ndị ọzọ nọ ebe ahụ na-eche ka achọpụtara ha na ihe dị egwu. “Ọ dịghị mkpa ka ọ dị otu a. Ijide n'aka na ewepụtara nnukwu nchekwa maka anụ ọhịa, yana mbọ a na-agba iji mechie ahịa ahịa anụ ọhịa na-ezighi ezi, ga-aga ogologo ụzọ iji chekwaa ụdị anụ ọhịa dị iche iche na mpaghara Mekong. "
Ọtụtụ anụ ọhịa akọwapụtara na akụkọ ọhụrụ - Umu ohuru di na ngọngọ - adịlarị n'ihe egwu nke ịnwụ ma ọ bụ nwụọ.
Nke a na-esi na achara, ọtụtụ nwere ụdị pụrụ iche dị ka ntọala ya, nke a chọtara na Ugwu Cardamom na-esi ísì ụtọ nke Cambodia, nke nwere ike ikpochapụ, na ahịhịa ọhụrụ a sitere na Laos, nke nọ n'ihe ize ndụ ugbu a n'ihi na agbazinyela ebe obibi ya maka nsị limestone.
Ọ bụ ezie na Laos na Mianmaa gbalịrị ịkwụsị azụmahịa na anụ ọhịa na-akwadoghị, site na ịba ụba na ntaramahụhụ na imechi ụlọ ahịa na ahịa, ndị na-achụ nta nwere ike ijide ma bufee ụmụ anụmanụ n'ofe oke, ọkachasị n'ebe ndị dị ka Mongla na Tachilek na Myanmar, Lee Poston kwuru, ọnụ na-ekwuru maka WWF na mpaghara Greater Mekong.
A ụsụ ntutu ya na-ada ka Lance Bass 'iconic frosted Atụmatụ nke ìgwè * NSYNC, a chọpụtara na sub-Himalayan obibi nke Hkakabo Razi Myanmar ọhịa.
Poston kwuru na ọnyà ndị e si na eriri igwe dị ọnụ ala na-ejikarị eme ihe aghara aghara, ha abụọ iji nweta anụ ọhịa maka oriri obodo na ijide ụdị ndụ dị egwu dịka agụ owuru na agụ maka ịzụ anụ ọhịa. Ọ bụ ezie na ọ toro ọrụ nke ndị ọrụ nchekwa mpaghara na-eso ma na-enyocha ebe ndị ahụ maka ọnyà, ọnụọgụ dị ukwuu na-eme ka ọrụ iwepụ ha sie ike.
N'agbanyeghị ihe ịma aka ndị ahụ, Poston kwuru na akụkọ ọhụrụ ahụ bụ "ihe na-egosi na ọ na-adịgide adịgide nke okike."
“Site na ịkọwapụta nchọpụta ndị a dị ịtụnanya nke ọtụtụ narị ndị ọkà mmụta sayensị ụwa, anyị na-eziga ozi na agbanyeghị na iyi egwu ahụ dị ukwuu na anụ ọhịa na Greater Mekong, olileanya ka dị maka ọdịnihu, maka na a na-achọpụta ọtụtụ ụdị ọhụụ ọhụrụ dị ịtụnanya. oge, ”ka o kwuru.
Na nkwupụta, Chapman kwuru “enwere ọbara, ọsụsọ na anya mmiri n’azụ nchọta ọhụụ ọ bụla. Mana ọ bụ agbụrụ megide oge ịkpọsa nchọpụta ọhụụ ka enwere ike ịme ihe iji kpuchido ya tupu oge agafee. ”
Team Grenada na-anabata ụgbọ mmiri ọhụrụ abụọ n'otu ụbọchị
Airbus họpụtara Philippe Mhun